Izindatshana zikaSofia Wilton Martech Zone |
Imibhalo nge USofia Wilton
USofia Wilton uyintatheli ngokomsebenzi kodwa ubhala izindaba ezimfushane ngesikhathi sakhe sokuphumula. Izindaba zakhe zishicilelwa emaphephandabeni endawo futhi zaziwa kahle ngezindaba zakhe ezikhangayo. Ubuye abhalele amabhulogi IChibi B2B ezihlobene nezindaba zamanje. Njengombhali onentshisekelo, uchitha sonke isikhathi sakhe esikhululekile ekubhaleni. Uhlala eNew York kepha uhamba isikhathi esiningi ngenxa yomsebenzi wakhe. Lokhu kumnika ithuba lokuhlola izindawo ezintsha futhi kufake nokuhlangenwe nakho kwakhe ezindabeni zakhe okunikeza umuzwa ongokoqobo.
NgoMgqibelo, Januwari 16, 2021 NgoMgqibelo, Januwari 16, 2021 USofia Wilton
Osukwini nasesikhathini samanje, asikho isizathu sokungazi ukuthi ungamaketha bani imikhiqizo nezinsiza zakho, nokuthi amakhasimende akho afunani. Ngokufika kolwazi lokumaketha nobunye ubuchwepheshe obuqhutshwa yidatha, sezihambile izinsuku zokumaketha okungahlosiwe, okungakhethiwe, nokwenziwa okujwayelekile. Umbono Omfushane Womlando Ngaphambi kuka-1995, ukumaketha kwakwenziwa kakhulu ngeposi nangokukhangisa. Ngemuva kuka-1995, ngokufika kobuchwepheshe be-imeyili, ukumaketha kwacaca kakhudlwana. It